"ဆရာ..ဆရာ.. ကျွန်တော့်ကို ကယ်ပါ။ ကျွန်တော် ဓာတ်ဆီ မှားသောက်မိလို့" လို့ ပြောတော့ ဆရာဝန်က " ကိစ္စမရှိဘူး။ ဒီရက်အတောအတွင်း ခင်ဗျား ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့" လို့ ပြန်ဖြေသတဲ့။
စာရေးသူ မိုးညညို0မှတ်ချက်များ
ကောင်မလေး ။ဖြည်းဖြည်းမောင်းပါဟာ ငါကြောက်လာပြီ၊
ကောင်လေး ။ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်၊
ကောင်မလေး ။မကောင်းပါဘူး ငါတကယ်ကြောက်လာပြီ၊
ကောင်လေး ။အဲဒါဆိုရင် ငါကိုချစ်တယ် လို့ပြော၊
ကောင်မလေး ။အင်း ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်။ အရှိန်ရှော့တော့နော်၊
ကောင်လေး ။အခု ငါ့ကို နောက် ကနေ ခပ်တင်းတင်း ဖက်ထားပေး
ကောင်မလေးက နောက်မှ ကြင်နာမှု များဖြင့်ဖက်လိုက် သည်။
ကောင်လေး ။ နင် ငါ့ဦးထုပ် ကို ယူဆောင်း လိုက်ပါလား၊ ငါ အဲဒီဟာ ကြီး ဆောင်းရတာ ယားလာပြီ...
နောက်နေ့သတင်းစာထဲတွင် မော်တော်ဆိုက်ကယ်တစ်စီး ဘရိတ်မကောင်းမှု ကြောင့် အဆောက်အဦထဲ သို့ဝင် တိုက်မိကြောင်း၊ ထိုဆိုက်ကယ်ပေါ်တွင် လူနှစ်ဦး ပါရှိကြောင်း၊ သို့သော် တစ်ဦး သာ အသက်ရှင် ကျန်ရှိ ကြောင်း ပါ လာသည်။
အမှန်မှာ လမ်းတစ်ဝက်ကတည်းက ကောင်လေးသည် ဘရိတ်ပေါက်နေသည် ကို သိပေသည်၊ သို့သော်
သူ့ကောင်မလေး အားမသိစေချင်ခဲ့၊ ထို့အပြင် ကောင်မလေး ထံမှ ချစ်တယ် ဟူသော စကား နှင့် ယုယ မှု များကို နောက်ဆုံးအကြိမ်ခံယူ သွားကာ မိမိသေခဲ့လျှင်ပင်ကောင်မလေး အသက်ရှင်နိုင်ရန်ု ကောင်မလေး အား သူ့ဦးထုပ်ကို ဆောင်းစေခဲ့သည်။
ဒီဝတ္ထုလေးကို forward မေးလ်က ရတာပါ..ကောင်လေးက အဲဒီလို အနစ်နာခံပြီး ချစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပမလားလို့ တွေးနေမိတာ။ ကျတော်ကတော့ မယုံဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေကသာ ချစ်တတ်ကြတာ၊ အနစ်နာခံတတ်ကြတာ၊ ကိုယ့်ချစ်သူအတွက်ဆို ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲကြတာ။ ကောင်လေးတွေကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲ။ ဖတ်လို့တော့ကောင်းပါတယ်။ အပြင်မှာလဲ အဲဒီအတိုင်းသာဆို ကောင်မလေးတွေ တော်တော်လွမ်းအားကောင်းမှာပဲနော်..
စာရေးသူ မိုးညညို 1 မှတ်ချက်များ
ချစ်သူ့ကဗျာ ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို မောင်လူဆိုးလေးအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကဗျာကို မရေးတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု ချစ်သူ့ကဗျာလေးကို ချစ်သူကရေးပေးလို့ တင်လိုက်တာပါ။
တို့နှစ်ယောက် မေ့လို့မရတဲ့ ၂၇
ကျန်ခဲ့ပြီ ။ ဒါပေမဲ့
ငါ့ရင်ထဲ ကျန်နေဦးမဲ့ .... အမြဲတမ်း
ခိုးမှုကျူးလွန်သော သူခိုးတစ်ယောက်ကို တရားသူကြီးက မေးခွန်းများ မေးနေလေသည်။
တရားသူကြီး။ ။ မင်း ပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုတာကို ၀န်ခံတယ်မဟုတ်လား?
တရားသူကြီး။ ။ ဘာလို့ဝန်မခံတာလဲ။ မင်းခိုးတယ်ဆိုတာကို မြင်တဲ့ မျက်မြင်သက်သေ ၃ ယောက်လောက်ရှိတယ်။
သူခိုး။ ။ ဒါဆို ကျွန်တော် ခိုးတာကို မမြင်တဲ့ သက်သေ ၁၀၀ လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကော။
တရားသူကြီး။ ။ ဟေ!
ငွေကြေးအမြောက်အမြားစုမိနေသော လူတစ်ဦးသည် မိမိသေဆုံးချိန်တွင် အဆိုပါငွေကြေးများကို မိမိနှင့်အတူ တစ်ပါတည်း ယူဆောင်သွားလိုသော ဆန္ဒပြင်းပြလျှက်ရှိရာ ရှေ့နေတစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်လေသည်။
အမျိုးသား။ ။ ကျွန်တော့်မှာ ငွေတော်တော်များများစုမိထားတယ်ဗျ။ အဲဒီငွေတွေကို ကျွန်တော်သေရင် တစ်ပါတည်း ယူသွားချင် တယ်ဗျာ။
ရှေ့နေ။ ။သြော်..အဲဒီတော့ ကျွန်တော်ဘာဆောင်ရွက်ပေးရမလဲ?
အမျိုးသား။ ။ ငွေတွေကို တစ်ခါတည်း ယူဆောင်သွားလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ခင်ဗျား ကျွန်တော့ကို အကြံပေးပါ။
ရှေ့နေ။ ။ အင်း..ဒီလိုလုပ်ဗျာ.. ခင်ဗျားငွေတွေကို ကျွန်တော့်ကိုပေးလိုက်။ ကျွန်တော်ဘဏ်မှာ သွားအပ်လိုက်မယ်။ ဘဏ်က လက်ခံဖြတ်ပိုင်း ခင်ဗျားကိုပေးလိုက်မယ်။ အဲဒီဖြတ်ပိုင်းကို ခင်ဗျားသေရင် တစ်ပါတည်း ယူသွားလိုက်ပေါ့။
အမျိုးသား။ ။ ဗျာ!
မုံရွာ, Myanmar (Burma)
အားလုံးကို ခင်မင်ပြီး ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါရှင် ။
1G,2G, 3G, 4G ဆက်သွယ်ရေးနစ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - အကြမ်းဖျဉ်း ရှင်းပြရုံလေးပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ Wireless Communication နည်းပညာစာအုပ်တွေ မှာ အကျယ်တစ်ဝင့် ရှင်းလင်း ထားပါတယ်။ ယခုက သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အခြေခ...
Goo Goo’s Blog
ချစ်သူ့ကဗျာ ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကို မောင်လူဆိုးလေးအတွက် တ...